APICMO Vatengi vedu Mishonga inogadzira Mutengo we CMO / CDMO Intermediates
COMBI-BLOCKS inotsvakurudza-based producer uye pasi rese mutengesi wekubatanidza zvivako zvekuvaka, zvipfeko uye makemikari akanaka.
KDC, Specialized Chemicals Importing Corporation, yakagadzwa mu1990.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. inyika yeIsrael yekambani yemishonga yemishonga inowanikwa muPetah Tikva, Israel. Iyo ndiyo yakakura zvikuru inogadzira mishonga yemishonga munyika uye imwe yekambani ye15 yakakura yemishonga pasi rese.
Hoffmann-La Roche AG ikambani yeSwitzerland yenyika yehutano inoshanda pasi rose pasi pemakamu maviri: Pharmaceuticals and Diagnostics. Roche ndiyo yechitatu-yepamusoro pharma company yose pasi rose.
GlaxoSmithKline plc (GSK) ikambani yeBrithani yemishonga inowanikwa muBrentford, London. GSK yaiva yekambani yepasi rese ikambani yemishonga yakakura yemishonga ye2015
Sun Pharmaceutical Industries Limited ndeyeIndia inogadzira uye inotengesa mishonga inogadzirwa nemishonga inoshandiswa yemishonga (APIs) kunyanya kuIndia neUnited States.
Alfa Aesar, iyo yakagadzirirwa muWard Hill, Massachusetts, United States, inopa vashandi zvigadziriswe uye zvigadzirwa zvekushandisa mukutsvakurudza nekugadzirwa, uye kuongorora. Vane zvivako munyika dzakawanda uye vanogadzira akawanda emakemikari atinotengesa.